ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် မဲပေးနိုင်ရေး ပုံစံ (၁၅) ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် (၃) ~ Myanmar Online News
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် မဲပေးနိုင်ရေး ပုံစံ (၁၅) ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် (၃)
၁။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများကို မြန်မာ့သက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ ဖြည့်သွင်းရန် ပုံစံ (၁၅)ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ပူးတွဲ ဖြန့်ဝေအပ်ပါသည်။
၃။ ပုံစံ(၁၅)ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ Website (https://www.uec.gov. mm/)၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Website (https://www.mofa.gov.mm/)နှင့် မြန်မာသံရုံး၊တိုကျိုမြို့၏ Website (http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/) တို့တွင်လည်း download ရယူနိုင်ပါသည်။
ပုံစံ(၁၅) ပြန်လည်ပေးပို့ရမည့် နေ့ရက်
၄။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အထက်ပါ ပုံစံ(၁၅)ကို အချက်အ လက်များပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်လျက် မြန်မာသံရုံး၊ တိုကျိုမြို့သို့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၅)ရက်အတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ပါရန် အသိပေး နှိုးဆော်အပ် ပါသည်။
၅။ ပုံစံ(၁၅)နှင့်အတူ လက်ရှိကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဓါတ်ပုံပါစာရွက်၏ မိတ္တူနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ကဒ်မိတ္တူတို့ကိုလည်း တစ်ပါတည်းပေးပို့ပါရန်နှင့်၊ ပြန်လည်ဆက် သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းအမှတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလည်းဖော်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၆။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက် ထားသည့် ပုံစံ(၁၅) ကို အထက်စာပိုဒ်ပါစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၅)ရက်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာသို့ အဆင်ပြေမည့် အစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ကြပါရန် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည် -
(Registered Mail ဖြင့်
ပေးပို့ကြပါရန်) Embassy of the Republic of the Union of Myanmar
Tokyo 140-0001, Japan.
ဖက်စ် (03) 3447 7394
၇။ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်လက်အသိပေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။